यो आधिकारिक छ, म क्र्याकबेरीमा छु Martech Zone
महिना र विचार विमर्श को महिना पछि, म अन्ततः काम गरे र एक खरीद ब्ल्याकबेरी कर्भ 8330 XNUMX० आज राती भेरिजन स्टोरमा।
गत बर्षको लागि म एक सामसु touch टच स्क्रिन प्रयोग गर्दैछु र असंख्य कलहरू छुटेको छु, पात्रोहरू समिकरण गर्न सक्दैन, र कललाई उत्तर दिनको लागि यसमा हेर्दा उभिन सक्दिन।
म एप्पलको ठूलो प्रशंसक हुँ, तर म गएको महिना मेरो आइपड टचको साथ गडबडी गर्दैछु यदि म टच स्क्रिनमा प्रयोग गर्न सक्छु कि भनेर हेर्नका लागि। म सक्दिन तपाईं तिनीहरू मध्ये जो यो सजिलो हुन्छ भन्न को लागी, यो छैन ... म फोन चाहान्छु कि म यो अपरेट गर्न क्रममा हेर्दै हुनुहुन्छ।
IMHO, यो मलाई लाग्छ कि टच स्क्रिनले हामीलाई एक कदम फिर्ता लिएको छ, भविष्यमा हैन।
साथै, मेरा धेरै साथीहरू ब्ल्याकबेरीमा सरे। क्रिस बगगट, कम्पेन्डियमको सीईओ ब्ल्याकबेरीमा फर्कनको लागि आईफोनबाट पनि छुटकारा पायो। एडम सानो, का सीईओ योजक मोबाइल, केहि समयको लागि मलाई ब्ल्याकबेरीमा कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। र नयाँ साथी वैनेसा लामर्स उनले मलाई उनको ब्ल्याकबेरी धेरै रमाईलो भने
हेल, यदि राष्ट्रपति ओबामाले आफ्नो क्र्याकबेरी बिना गर्न सक्दैन, म केवल कल्पना गर्न सक्दछु सेवा र उत्पादन कत्तिको महान् छ। आज रात म फोन कल कसरी गर्ने र कसरी प्राप्त गर्ने भनेर पत्ता लगाउँदैछु। एडमको सिफारिश अनुसार मैले ट्विटरबेरी डाउनलोड गरें ताकि म कम से कम यसबाट ट्विट गर्न सकुँ!
त्यसो भए… क्र्याकबेरी-एडिक्ट्स सबै, मलाई तपाईंको मनपर्ने अनुप्रयोगहरू दिनुहोस्!
टैग: हाफअधिकार प्रयोगशालाहरूप्राधिकरणउज्यालोश्रेणी ट्र्याकिंगWordPress सेटअप गर्दै
रूपान्तरण भएकोमा बधाई छ। म तपाईंसँग टच स्क्रिनको बारेमा असहमत छु। आइतवार मा मेरो ब्ल्याकबेरी टच स्क्रीन तूफान अपग्रेड र यो प्रेम। मलाई यो प्रयोग गर्न असाधारण अप्ठ्यारो लाग्दछ र पूर्ण वेब ब्राउजर उत्तम छ।
म विज्ञापन गर्दछु कि दुई बर्ष पहिले जब मैले मेरो पहिलो ब्ल्याकबेरीमा स्विच गरेको थिएँ म मेरो साथीलाई यसको बारेमा बताउँदै थिएँ र उनले भने कि मलाई थाहा छैन किन उनीहरूलाई आवश्यक छ। भोलिपल्ट मेरो देखे पछि म उहाँबाट उसको नयाँमा कल आएको छु।
मलाई दोस्रो विचार नबनाउनुहोस्! 🙂
म मेरो ब्ल्याकबेरीको पनि लतमा छु। मसँग आँधी पनि भयो
तिम्रो लागि राम्रो! तपाईको निर्णयमा बधाई!
ट्वीटरका लागि, मेरो रिकोमेन्डेसन उबरट्विटर हो ... र तपाईंलाई यति चाहिन्छ। नेटिभ अनुप्रयोगहरू जानको लागि पर्याप्त छन्।
तपाईंको कर्भको मजा लिनुहोस् ... यो उपकरणको नर्क हो!